မေမေတို့ မလုပ်မဖြစ် လိုက်လုပ်သင့်သော တန်ဖိုးရှိတဲ့ မိခင်တစ်ဦးရဲ့ အမူအကျင့် (၈) ချက်
Home Parent Guide မေမေတို့ မလုပ်မဖြစ် လိုက်လုပ်သင့်သော တန်ဖိုးရှိတဲ့ မိခင်တစ်ဦးရဲ့ အမူအကျင့် (၈) ချက်
မိခင်တိုင်းက သူတို့ရဲ့ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ သားသမီးတွေအတွက် နေ့စဉ်နိစ္စဓူဝလုပ်ငန်းတွေက များလှပါတယ်။ ကလေးတွေအတွက် တစ်မျိုး၊ ခင်ပွန်းသည်အတွက် တစ်ဖုံ၊ လူမှုရေးကိစ္စအဝဝက ရှုတ်ထွေးလွန်းတော့ မေမေတို့လည်း ပင်ပန်းနေလောက်ပါပြီ။ တကယ်တော့ မိခင်ဖြစ်ခြင်းက ဘဝရဲ့ အကြီးမားဆုံးသော လက်ဆောင်နှင့် အခွင့်ထူးတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာလည်း မေမေတို့အတွက် မေမေကောင်းတွေရဲ့ အမူအကျင့်တစ်ချို့ကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
၁။ မနက်စောစော စတင်ပါ
ထက်မြက်ပြီး တန်ဖိုးရှိသော မေမေတို့က နေ့တစ်နေ့ကို စောစောစတင်တာက ဘယလောက်အရေးကြီးကြောင်း သိကြပါတယ်။ ဆိုလိုတာက တစ်ခြားလူတွေထက် စောစောနိုးခြင်းပါ။ တစ်ခြားလူတွေမထမှီ အရာရာကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကလေးငယ်နိုးလာပြီး အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါ ကလေးကိုတစ်မျိုး၊ အလုပ်ကတစ်ဖက်ဆိုရင် အာရုံစူးစိုက်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက် အမှားအယွင်းယွင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မေမေတို့ရဲ့ ခေါင်းကို ရှင်းလင်းပြီး တစ်နေ့တာအတွက် ပြင်ဆင်ဖို့ အချိန်ပေးပါ။ တစ်နေ့တာကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းမလဲဆိုတာမျိုး မှတ်စုတိုရေးပါ။ ဒီလိုဆိုရင် စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ နေ့သစ်ကို စတင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
စာရင်းသာ ပြုစုထားမယ်ဆိုရင် မနက်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကို မိုးချုပ်ခါနီးမှ သတိရပြီး ထလုပ်ရတဲ့ ပြဿနာမျိုးတွေကို ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး အိမ်အလုပ်တွေကလည်း စေ့စပ်သေချာတိကျနေပါလိမ့်မယ်။ သင့်ကလေးတွေ၊ သင့်ရဲ့ ခင်ပွန်းတို့နဲ့အတူ စကားပြောဆိုပြီး ရက်သတ္တပတ်စာအတွက် စာရင်းပြုစုပါ။ ကလေးတွေကစားကွင်းသွားရမယ့်နေ့၊ ရေကူးသင်ရမယ့်ရက်တွေ၊ နောက်ဆုံးကုန်စုံဆိုင်သွားရမယ်နေ့တွေ စသဖြင့် စာရင်းပြုစုထားပါ။ သင့်အတွက် ရှင်းလင်းပြီး နားလည်လွယ်မယ့် စာရင်းမျိုးဖြစ်ရမယ့်အပြင် မြင်သာထင်သာရှိတဲ့ နေရာမှာ ထားပါ။ ဒီအရာက သင့်ကို အချိန်ကုန်သက်သာစေရုံသာမက စိတ်ဖိစီးမှုကနေလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
၃။ အလုပ်တွေကို တစ်ခုချင်းစီလုပ်ပါ
ဗျာမများပါနဲ့။ တစ်ခုပြီးမှ တစ်ခုလုပ်ပါ။ အလျင်စလိုပြီးချင်စိတ်တွေများနေတဲ့အခါ အလုပ်တွေက ကျန်ခဲ့တတ်ပါတယ်။ multitasking လုပ်တဲ့နေရာမှာ မေမေတို့က ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုပေမယ့် မှားလုပ်မိရင် စိတ်ဖိစီးမှုအများကြီးရလာနိုင်ပါတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးအလုပ်ကနေ စလုပ်ပြီး တဖြည်းဖြည်း တစ်ခုချင်းစီလုပ်ဆောင်သွားပါ။
၄။ အလုပ်တာဝန်တွေကို ခွဲပါ
မေမေတို့အနေနဲ့ ဘယ်လောက်ပဲ အလုပ်တွေကို တစ်ယောက်တည်း မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ကိုင်ပြီးစီးချင်ပေမယ့် တစ်ယောက်တည်းအားလုံးကို မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါဟာ မေမေတို့ကို စိတ်ဖိစီးမှုတွေပဲ ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်(ဒီအချက်က မိခင်တော်တော်များများက ပိုမာကျောပြီး ပိန်တဲ့ပုံပေါက်နေတာကို ကျွန်မတို့တွေ့မြင်နေရတဲ့ အကြောင်းရင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်)။
မိသားစုဝင်တိုင်းကို သူတို့နိုင်ရာ နိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်စေပါ။ အိမ်ရဲ့တာဝန်မှာ အိမ်မှာနေထိုင်သမျှ လူအားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေကို သူတို့ကစားတာတွေကို သူတို့ကိုယ်တိုင် ပြန်ပြီးသန့်ရှင်းစေပါ။ မီးဖိုချောင်အလုပ်တွေမှာ တတ်နိုင်တဲ့ ကလေးတွေကို မီးဖိုချောင်မှာ ဝင်ကူစေပါ။ ဒီအရာက မိသားစုနှောင်ကြိုးတွေကို ဖန်တီးပေးသလို အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုလည်း တည်ဆောက်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အရင်အပတ်က လုပ်ခဲ့သမျှတွေဟာ အဆင်ပြေချောမွေ့ခဲ့ရဲ့လား ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ။ ဘယ်နေရာမှာ မှားယွင်းနေလဲသုံးသပ်ပါ။ မနက်စောစောထလည်း အကျိုးမထူးဘူးဆိုရင် ညနေပိုင်းတွေကို ပိုဦးစားပေးလုပ်နိုင်မလဲ ကြည့်ပါ ။ ကိုယ့်ရဲ့ မိသားစုနဲ့ အဆင်ပြေမယ့်နည်းလမ်းကို သုံးပါ။ မေမေတို့အတွက် အချိန်တွေပိုထွက်လာစေဖို့၊ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝ၊ မိသားစု၊ ပန်းတိုင်တွေ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် တစ်ခြားအရာတွေကို ပြန်လည်အကဲဖြတ်ဖို့ အလေ့အကျင့်တစ်ခုပြုလုပ်ပါ။
၆။ သင့်ကိုယ်သင် ပျော်အောင်ထားပါ
ကိုယ်ဟာ မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် တစ်ခြားလူတွေအတွက်လည်း တာဝန်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ယခုလိုမိခင်တစ်ယောက်မဖြစ်ခဲ့သေးခင်မှာ ဘဝတစ်ခုရှိခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာ သတိရပါ။ မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် အရင်တုန်းက ပျော်စရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ချို့ကို လက်လွတ်သွားတာလား?
မဟုတ်သေးပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာတွေကို လုပ်ဖို့၊ ပိုကောင်းတဲ့မိခင်ဖြစ်စေဖို့ စတဲ့အရာနှစ်ခုကို လူနေမှုပုံစံတစ်ခုဖြစ်အောင် လုပ်ပါ။ ဥယျာဥ်စိုးပျိုးခြင်း၊ အားကစားလုပ်ခြင်း၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်ထွက်ခြင်း၊ အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်ခြင်း၊ နောက်ဆုံး ကခုန်ခြင်း စတဲ့အရာတွေက သင့်ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို တိုးတက်စေပြီး အရည်အသွေးရှိသော ဘဝကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒီအချက်ကတော့ မေမေတို့ လုံးဝလိုက်လုပ်သင့်တဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်နေရတဲ့အခါ အနားယူဖို့အချိန်တွေက ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လုံးဝလက်လွတ်မခံပါနဲ့။ ကိုယ်ဟာ စက်ရုပ်တစ်ရုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ အနားယူခြင်းက ၎င်းကို ပြန်လည်အားဖြည့်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏနှင့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော အနားယူခြင်းများရှိလျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းက စိတ်အခြေအနေကိုလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ စာရင်းထဲမှာ အနားယူရမယ့်စာရင်းကိုပါ ထည့်ပေးပါ။
မိခင်တစ်ယောက်မဖြစ်ခင် လွတ်လပ်လှပသော မိန်းမပျိုလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တာကို သတိရပါ။ အဲ့ဒီမိန်းမပျိုလေးကို ဘယ်တော့မှ လက်မလွတ်ပါစေနဲ့။ မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်တာနဲ့ အလှမပြင်ရတော့ဘူးလို့ မဆိုလိုပါ။ တစ်ချို့မိခင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ သားသမီးတွေကို အလွန်စိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်ပြီး အော်ဟစ်ဆူဆဲကာ စိတ်ပင်ပန်းနေကြရပါတယ်။ တစ်ချို့မိခင်တွေကကျတော့ ကလေးဘေးနားရှိနေလို့သာ အမေလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ရပေမယ့် တစ်ချို့မိန်းမပျိုလေးတွေထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပိုဂရုစိုက်ကြပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဂရုစိုက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
Previous articleဂျပန်မိဘတွေက သူတို့ကလေးတွေကို အစားဇီဇာကြောင်သူမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုသင်ပေးသလဲ?
Next articleမိခင်နှင့်သမီးတွေကြားက ပြောဆိုဆက်ဆံရေး(communication)အတွက် သိကောင်းစရာများ